We She Me: The Godfather
MrDBA - 4/17/09, 10:48 AM
P.Ti - 4/17/09, 12:02 PM
အဟုတ်ပဲ။ ကိုယ်ကိုတိုင် အဲလိုနေရာရောက်မှ ခံစားတတ်မှာ။ အဲဒီရုပ်ရှင် ထပ်ကြည့်ချင်သွားပြီ။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။ ကိုအန်ဒီတို့မိသားစု နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
Ko Paw - 4/17/09, 12:51 PM
ကိုယ့်ဆရာကြည့်ရတာ ဖင်ပူနေပြီ ထင်ရဲ့။ ဒီမှာလည်း ဖင်မီးလောင်နေပြီဗျိုး။ ဂေါ့ဒ်ဆန်းလုပ်ရတာလောက်တော့ ဘယ်ဟာမှ ဇိမ်ကျမယ်မထင်ဘူး။း-)
ဘလော့ဂါရော၊ ဘလော့ဂျာ သူမရော၊ သမီးနဲ့သားပါ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ….လို့။ (သတိထားရင်း “လို့” ကြီး ပါသွားပြန်ပြီ။)
Phyo Maw - 4/17/09, 2:57 PM
ဝေမျှတာ ၀မ်းသာစရာ :D
Phyo Evergreen - 4/17/09, 3:29 PM
ဟုတ်တယ်.. အိမ်မှာ ဘကြီးတစ်ယောက်ကိုဆို ဦးလေးတွေအဒေါ်တွေက ခုထိကြောက်ရတုန်း.. မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါဗျာ..။
Anonymous - 4/17/09, 3:40 PM
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ..အစ်ကို၊ အစ်မနဲ့ တူတူမလေး။
နေညိုရင့် - 4/17/09, 6:58 PM
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ Godfather ရဲ့ တာဝန်က ခေါင်းကြီးပါတယ်။ သူ့ ကို ချစ်ကြောက်ရိုသေမှု ပေးကြသလို သူကလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ၀တ္ထရားတွေ ကျေပြွန်အောင် လုပ်ပေးရတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Godfather လိုလူတွေ မရှိစေချင်ပါဘူး။
မာဖီးယားဂိုဏ်းလို နေရာမျိုး Godfather တွေဆက်ရှိနေတာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့လုပ်ရပ်တွေကို သူကိုယ်တိုင်ကော သူ့ လက်အောက်ငယ်သားပါ ကျူးလွန်ဖို့တွန်းအားပေးနေတယ်ပါပဲ။
ထို့ အတူ မိသားစုမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တာဝန်မှု ပိုများနေတဲ့သူကို Godfather တယောက်လို မဆက်ဆံချင်ပါဘူး။
Godfather လိုလူတွေထက် Leadership သမားတွေကိုပဲ မြင်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုအင်ဒီရေ အခုတော့ Godfather ရုပ်ရှင် ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။ :)
မိသားစုတခုလုံး မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်နဲ့ အစပြုပါစေ။
nyimuyar - 4/17/09, 9:45 PM
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ တမိသားစုလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ အေးချမ်း ပါစေဗျာ။ သြော် သူတို့အရပ်မှာ တကယ်ပဲ ချမ်းအေးတော့မှာပါလား။ ဒီမှာတော့ ပူလို့ ဗျို့ ။
ဇနိ - 4/17/09, 10:52 PM
ရှေ့ရောက်လာရင် တာဝန်လည်း ကြီးသလို တာဝန်လည်း ယူတတ်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ တာဝန်ယူတတ်တဲ့ အစွမ်းအစမရှိရင်တော့ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ တာဝန်ကလည်း မယူတတ်၊ နေရာကလည်း မဖယ်ဆိုရင်တော့ အတော်ခက်ပါတယ်။
ကိုအန်ဒီ၊ အမ၊ သမီး နဲ့ သား - နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှု အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါစေ။
TZA - 4/17/09, 11:33 PM
ဂေါ့ဖားသားကြိုက်တာချင်းတူတယ်.. ကျနော်ကတော့ မာလွန်ဘရန်ဒိုလို အသံဩဩနဲ့ ပြောနိုင်အောင်ပဲကျင့်နေတာဗျ။
Rita - 4/18/09, 12:26 AM
ကျွန်မကတော့ စာအုပ်ပဲ ဖတ်ဖူးတာပါ။
ခုမှ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရကောင်းမလား တွေးမိတယ်။
Where & How လေး သိတဲ့သူ ပြောကြပါဦး။
မီယာ - 4/18/09, 3:14 AM
ရုံးမှာ job swap လုပ်ဖို့ အကြံပေးဖူးတယ်... သူများနေရာ ယူချင်တဲ့သူတွေကို တနေ့လောက် နေရာ ယူခိုင်းကြည့်ချင်တယ်။ ကိုအန်ဒီတို့ မိသားစု နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေနော်
imaginary clouds no2- 4/18/09, 9:22 PM
ဒီအရေးအသားလေးကို ကြိုက်တယ်ဗျာ ။
imaginary clouds no2- 4/18/09, 9:24 PM
ကိုယ်တိုင် ပလေယာ ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မန်နေဂျာ ဆိုတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေလိုပေါ့ ကိုယ့်အသင်းအခြေအနေမကောင်းတော့ရင် ကိုယ်တိုင်လည်း ဝင်ကန်ရတာပဲ ။
T T Sweet - 4/19/09, 2:44 AM
ဂေါ့ဖားသား သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ အခွေပိုင်ဝယ်ထားတယ်။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီထဲက ဒွန်တွေကိုလဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဂေါ့ဖားသားဖြစ်ဖို့ကလည်း မလွယ်ပါဘူး။ အရည်အချင်းရှိမှ။ တော်မှ။နောက် လက်ရဲဇတ်ရဲဘို့လဲလိုသေးတယ်။ အဲဒီကားမှာ အယ်ပါစီနိူက အကိုအကြီးဆုံးနဲ့ အလတ်ကို ကျော်ပြီး ဂေါ့ဖားသားဖြစ်လာတာပဲကြည့်လေ။ ကိုအန်ဒီပြောသလို ဂေါ့ဖားသားဆိုတဲ့ နာမည်ရအောင် တာဝန်ယူမှုတွေ ပေးဆပ်မှုတွေကလဲ အများကြီးကိုး။
Anonymous - 5/15/09, 8:59 AM
All three series of Godfather were my favorites movies. I watch them several time. When I was young, I kind of admired Michael. Recently I watched it again and I have kind of disgusting feeling for Michael. I can't understand how he can kill his own brother. or can't justify it.